बैशालु टाटुसँग कुराकानी - Dainik Nepal
विश्व बिनोद २०७६ जेठ २९ गते ८:१६
अहो, मेरो ढाड, नाइटो, कम्मर र पाखुरामा खोपिएको टाटु पनि खुस्खुसाएर बोल्न थाल्यो । म अचम्मित भए, अनि टाटुका प्रश्नहरु र गुनासोसँग म समाहित हुँदै दोहोरो सम्बादमा ब्यस्त हुन थाले । सायद सत्र अठार बर्षकी हुँदी हुँ मैले टाटु खोप्ने बेला । त्यो समय म भर्खर काठमाडौंमा जीवन धान्ने मनशायले भित्रिएको थिए । जिवन मात्र धान्ने त्यो शौख बाध्यतामा परिणत भयो । काठमाडौं कहाँ सोचेको जस्तो हुन्थ्यो र, मैले जीउ बेच्नलाई पनि टाटुले आफूलाई रङ्ग्याएर ति बारहरुमा नर्तकी बनेकी थिए । तिनै बेला खोपिएका टाटुले आज म सँग सम्बाद गरिरहेको छ ।
टाटु — मलाई उत्तर चाहियो किन टाटु खोपेकी थियौ ?
म — जीवन धान्नु पर्ने बाध्यता थियो, पेट भर्नको लागि टाटु खोप्नु पथ्र्यो
टाटु — टाटु खोपेपछि के हुन्थ्यो ?
म — म त्यतिबेला बैशले उन्मुक्त थिए , बारमा आएका युवाहरु झुमाउन र घुमाउन तिम्रै त प्रयोग गर्ने गर्थे ।
टाटु — आजकल किन यि टाटुमा मैले चुम्बनको अनुभव नगरेको धेरै भयो त , किन ?
म — हेर म बुढी भै सके, आजकल बारमा नाच्न पनि सक्दिन अनि मेरो अनुहारको चाउरी बढ्यो अनि म पनि दाउरी भै सके, यो बुढो छालामा को मुर्खले चुम्बन गरोस् ।
टाटु — आजकल किन अरुले मलाई फर्केर पनि हेर्दैनन् ?
म — सुन न मलाई पनि मनमा खड्केको कुरा यहि नै हो, सायद टाटुको उमेर पनि होला
म यति उत्तर दिएर मनमनै बिगत तिर फर्कन थाले । त्यो बेला यही टाटुमा आएर चुम्बन गर्ने ठिटाहरु निकै थिए । रातकी रानी बनाउन उद्यत लामो जमात हुन्थ्यो । लाईनमा राखेर, पर्खाएर उनीहरुको प्यास मेटाउने काममा म मग्न थिए । दिउँसो भर सुत्ने र बेलुकी पछि मेरो कमाईको लागि धन्दा शुरु हुन्थ्यो । म घर परिवार बाट टाढा भै सकेकी थिए । मलाई लाग्छ म आफ्नै घर बनाउँछु भनेर गाउँको घरबाट निस्के पछि अर्काको घरमा डेरमा थिएँ । यिनै टाटुको सहायताले बैंश पोख्ने गर्थे । यस्तो जमाना थियो मेरो महिनाबारीको दिनमा पनि ति ठिटाहरु ओछ्यान तताउन आईपुग्थे अनि इन्कार गर्दा पनि प्यास मेटेर जान्थे । आखिर यिनै टाटुको सहायतले मैले केही रकम जम्मा पनि गरिसकेको थिए । फेरी टाटुको आवाज सुनेर म टाटु तर्फ नै ध्यान दिए ।
टाटु — ए, भन त , अनि किन त्यो धन्दा बन्द गर्यौ ?
म — एक दिनको कुरा थियो, मैले नाच्ने त्यो बारमा मेरो नाता पर्ने भाई आए अनि मलाई नचिनेर नचाउन थाले, म अन्यत्र भाग्न कोशिस गरिरहेको थिएँ तर उ म भन्दा बलिष्ठ थियो । समातेर निकै बेर नचायो अनि मलाई आफ्नो पेशा प्रति घृणा जाग्न थाल्यो । आखिर स्तन हल्लाएर, कम्मर हल्लाएर, आँखा झिम्क्याएर अनि देहको संसर्ग गराएर कमाएको पैसाले पेट त भरिदो रहेछ तर आफ्नै भाईहरु पनि त तिमि जस्ता टाटुको आवरणमा झुक्किएर झुम्मिन आउँदा रहेछन् नि ।
टाटु — अनि तिमीले त्यो बार कहिले छोड्यौ त ?
म — बार छोड्दा म कुमारी आमा भै सकेकी थिएँ । खै त्यो दिनको सामुहिक संसर्गबाट म गर्भवती भएको थिए । उनीहरु को थिए, कहाँ बाट आएका थिए म केही जान्दिन थिए, जब भुँडीको आकार बढदै गयो, तब बारमा मेरो आकर्षण घट्न थाल्यो अनि म नाच्न नसक्ने भए । अनि यो गर्भको बच्चालाई सुरक्षित जन्मको लागि पनि मैले त्यो बारलाई सदाको लागि छाडिदिए । बच्चा जन्म्यो पनि तर आज अपरिचित बाबुको सक्कली छोराले पनि मेरो टाटु देखेर भन्छ — आमा मलाई पनि टाटु खोपिदिनुहोस् न ।
अत्यासलाग्दो यो सपना देखेर म झसंग भए, आडैको छोरीले निन्द्रामा मेरो टाटु खोपिएको हात समातेर सुतिरहेको थिई । म उसलाई सुम्सुम्याउन थाले । मेरा टाटु र बैस देखे म एक तमास आकाशका ताराहरु हेरी रहेँ अनि सोचेँ जिन्दगीका सपना पनि ति ताराहरु जस्तै असरल्ल भए अनि मेरा ति रातका संसर्गहरु पनि यिनै ताराहरु जति नै थिए कि गणना गर्ने हो भने?
आँखाबाट अनायश आँसु झरेर छोरीलाई चिसो भएछ , चिसोेले छोरी उठी अनि मेरो आँखाको आँशु पुछिदिन थाली अनि भन्न थाली — आमा नरुनु म ठूली भएर हजुरलाई पाल्छु । म भने उसको भविष्य मेरो जस्तै हुने त हैन भनेर फेरी भविष्यको कुरामा घोत्लिन थाले । तारेमाम् ।